Saldhiga Milateriga Turkiga oo maanta laga furayo magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Saldhiga Milateriga Turkiga oo maanta laga furayo magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa in uu ka qeybgalo munaasabada xariga looga jarayo dhismaha Saldhiga milateriga iyo xarunta tababarada ciidamada oo ay hirgelisay dowladda Turkiga.
Munaasabada ayaa waxaa ka qeybgalaya mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Turkiga iyadoona saldhigan loogu talagalay in markiiba lagu tababari karo ilaa 10,000 oo askeri.
Taliyaha guud ee Ciidamada dalka Turkiga Hulusa Akar ayaa ku sugan magaalada Muqdisho,waxaana la filayaa in Muqdisho ay soo gaaraan mas’uuliyiin kale oo ka socda dowladda Turkiga si ay uga qeybgalaan munaasabadda xarig jarka ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shalay Muqdisho kula kulmay Taliyaha guud ee Ciidamada Turkiga,waxayna kawada hadleen sidii dowladda Turkiga ay u kordhin lahayd taageerada ay fidiso Soomaaliya.
Saldhigan milateri ayaa dhismaihiisu socday muddo laba sano ah,waxaana laga dhisay xeebta Jazeera ee magaalada Muqdisho,waana midka ugu weyn ee Turkiga ka hirgaliyey meel ka baxsan xuduudihiisa.